မောင်ဆာမိနှင့် ထင်မိယောင်မှား ဖြစ်ရပ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မောင်ဆာမိနှင့် ထင်မိယောင်မှား ဖြစ်ရပ်များ
မောင်ဆာမိနှင့် ထင်မိယောင်မှား ဖြစ်ရပ်များ
Posted by မောင်ရိုး on Jul 17, 2014 in Creative Writing | 39 comments
ကျနော်စာမရေးတတ်ပါ ။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံ ရေးနေမိပြန်သည် ။ ရေးပြီးတိုင်းလည်း ပြန်ဖတ်ဖို့ဝန်လေးနေမိသည် ။ ထို့အတူ ပြန်ဖတ်မိတိုင်းလည်း ဆက်ရေးဖို့နောက်တွန့်နေပြန်သည် ။
ကျနော်အကြောက်ဆုံးများစွာထဲမှတစ်ခုသည် ကိုယ့်စာကိုယ်ပြန်ဖတ်ခြင်းပင် ။
ပြန်ဖတ်မိတိုင်းလည်း ရှက်ရွံ့အားငယ်မိပြန်သည် ။
နောင် မရေးဖြစ်အောင်ထိမ်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည်က အကြိမ်ကြိမ် ။ တကယ်တော့ ကျနော် မလိုက်နာနိုင်ခဲ့ပါ ။
မီးဝေးလျှင် ချိတ်ပြန်မာသွားသလို ကျနော်လည်း ကိုယ့်စာကိုယ်မဖတ်မိလျှင်
ရောဂါဟောင်းက ပြန်ထ လာပြန်တော့သည် ။
အခုလည်း ကျနော့်ရောဂါ ထပြန်လေပြီ ။
……… “”” အားးးးးးးးးးးး””” .……
ပထမဆုံးအော်သံဖြစ်သော “”အားးး “” သည် အိမ်သာအတွင်းမှ အမျိုးသမီးတဦး၏အသံဖြစ်သည် ။
ဒုတိယမြောက် “”အားး”” သည် ကျနော်မောင်ဆာမိ၏ အသံဖြစ်လေသည် ။
ရန်ကုန် – ကျိုက်ထီးရိုး-သာမည ခရီးစဉ်သည် ယနေ့တွင် ပြီးဆုံးလေပြီ ။ ရန်ကုန်သို့ပြန်ရန်ဖြစ်ပြီးခရီးစဉ်တလျှောက် လမ်းကြုံသောဘုရားများကို ဝင်ရောက်ရပ်နားပေးမည်ဖြစ်လေသည် ။
” ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဖြစ်ရလေ ဆရာရယ် ဟားဟား ဟား ”
” ……… ဟယ် မထင်ရဘူးနော်…… သနားပါတယ် ………”
“.…… … ဘဝကိုတော့အရှုံးမပေးဘူးနော် … ဒုက္ခိတပေမယ့် ကားမောင်းပြီး လုပ်ကိုင်စားတာပဲ ……………”
“………… နင်တို့ကလည်းဟယ် …… စကားမပြောတတ်တာနဲ့ နားမကြားရုံလေးပါ ကျန်တာအကောင်းကြီးရှိပါသေးတယ် ခစ်ခစ် …………… ”
“.…… ×××××××××××××××××××× ……………… ××××××××××……… ”
” ……… ++++++++++++++ ……………………… ++++++++++ ………”
သြော်…. ကွမ်း ကွမ်း
ဟီဟိ…. ဦးဆာမောင်းတဲ့ကားပေါ်က မိန်းကလေးသာဖြစ်နေရင်တော့လား
ညကြီးမင်းကြီး ပြုံးစိစိနဲ့ ဖတ်သွားတယ်ဗျာ
အောက်မှာ ဆြာဂပြောသလိုဘဲ ။
ကောင်မလေးကတော့ ကျုပ်ကားပေါ်ကမဟုတ်တာသေချာပါတယ် လေ ။
ကျုပ်ကားပေါ်ကဆို ကျုပ် စကားများတာသူသိတာပေါ့
ကားမောင်းတာကို ဘူး .. ဘူး .. တဲ့
ပါးစပ်နဲ့ မှုတ်ပြလိုက်သေးသတဲ့ … ဟီဟီဟိ
ညကြီး အချိန်မတော် တစ်ယောက်တည်း တခွိခွိနဲ့ ရီရင်း
ဥဆာရဲ့ ထင်မိယောင်မှား ဖြစ်ရပ်တွေကို ဖတ်သွားပါတယ်ဗျို့ ….
ကျုပ်မှာ ညကြီးသန်းကောင်အပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ပေါက်ကရတွေဖြစ်လို့ ။
ဒရက်ထဲမှာ သုံးလေးခုလောက်ထပ်သွားတယ် ။
စောစောစီးးးးစီးးးး ရီ နေ ရပြီ..
စွံချက်ကတော့ သနားးဂရုဏာ တွေပါ ရလိုက်တဲ့ သဘော။
ခိ။ အနော့ ရဲ့ တစ်ရွာတစ်ကျီ စားးဖိုမှူးးးးကြီးးး ပီ သ ပါ ပေ တယ်။
ငယ်နာမည် သိတယ်မဟုတ်လား ပြောပြီးပြီနော်
ဆွံ့ အ နားမကြား ဒုက္ခိတအသွင် ဆောင်လျက်ကပင်… စော်ကြည်မန်း…တည်း…
အို… ဂွဇက်မေတ္တာတုံး အမောင်ကြောင်ဂျီးနှင့်တကွ ဂွဇက်သားအပေါင်းတို့…
ဆြာဆာမိထံမှ ပီယဆေးအား ရိုက်လုတန် လုကြကုန်လော့… အားဟိ
ဆြာကျောက်နဲ့ ဆြာညိုတို့တော့ဆေးအလုံးကြီးကြီး ထိုးလေပြီတကားးး
ပီပီသသ ပြောရင် ရတယ်ဆိုလားးး
ဟားဟားဟားးး … ရယ်လိုက်ရတာ ..
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရသလိုပဲ မျက်စိထဲ မြင်ယောင်မိတယ် ..
ဟဲဟဲ ဒါမျိုးတွေက အမည်းရောင်စာမျက်နှာတွေလေ
ဟီးဟီး ရီလိုက်ရတာ အူကိုနာရော။ ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးနော် အူးဆာ။သူက အခု ဒီရွာသူဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
အဲဒီမာတုဂါမတွေ ဒီထဲမရောက်ဘူးလို့ဘယ်ပြောနိုင်မလဲ နော …………
အော် ကွယ် သူတို့လည်းဖတ်မိရင် တိတ်တိတ်လေးငြိမ်နေကြမှာပါလေ
ခရီးသွားရင်းအတွေ့အကြုံလွဲလေးတွေကို ဖတ်လိုက်ရတော့ စိတ်လက်ရွှင်လန်းပေါ့ပါးသွားတယ်ဗျာ
နောက်လည်း ရောဂါဖေါက်လာရင် ထပ်ပြောပါဦးမယ် ဟေးဟေး .…
ဟာသ ရသ အပြည့် ပေးသော
အိမ်သာ တံခါး သွားဆွဲဖွင့် မိသော ကိုဆာမိ…။
ဆွံ့အ နေသော ကိုဆာမိ…။
ဘဝကိုတော့အရှုံးမပေးဘူးနော် … ဒုက္ခိတပေမယ့် ကားမောင်းပြီး လုပ်ကိုင်စားတာပဲ
ဟု အပြောခံရသော ကိုဆာမိ…။
အပြုံးပန်းတွေ တဝေေ၀ နဲ့ ဖတ်သွားပါတယ် ကိုဆာမိရေ…။
ရောဂါဟောင်းတွေ ခဏခဏ ပြန်ထ လာပါ…
ကျန်ရှိသည်များလဲ မြန်မြန် အခွင့်သင့်ပါစေကြောင်း….
တကယ်တော့ ဒါတွေက သိမ်းထားတဲ့အမည်းရောင်စာမျက်နှာတွေလေ
ရေးစရာဘာမှမရှိလို့ ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးးးးး ……… :hee:
အဟိရီလိုက်ရတာဦးဆာရယ်။ အဲ့ကတဲကကွမ်းပြတ်ကေား ဟိဟိ
ကွမ်းက စွဲတယ်ရယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး မသဲနုရယ်
အခု အိမ်ကသားတော်မောင်က စည်းကမ်းတွေထုတ်နေလို့
အူးဆာက အရေးကောင်းမှန်းသိပြီးသား.. စကားပုလ္လင်ကခံနေသေး.. ရီလိုက်ရတာမော… အဝေးပြေးကားသမားတွေ.. ကားသမားမားတွေကွမ်းစားတာလည်း အိပ်မငိုက်အောင်စားတာတဲ့.. ကွမ်းတွေအဆက်မပြတ်စားပြီး ရေသောက်လည်းနည်းကြမှာပဲ.. အဲဒါကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက်သိပ်မကောင်းဘူးနော်.. :))
ကွမ်းကတော့ မစားဖြစ်တော့ပါဘူး
ကားသမားတွေကတော့ တကယ်ကို ဝါးသဗျာ
ဘယ်လောက်တောင်စွဲကြသလဲဆိုရင် ညအိပ်ရင်တောက်မှ ကွမ်းလေးငုံလျက်သားဗျ
ကစာမိရေ… ကိုယ်လက်အင်္ဂါဒွေထဲမှာ လျှာအယေးကျီးဇုံးဗ… လျှာ လျှာ
ဒီလောက် ” ပြောင်ချော်ရသ ” မြောက်တာ…
မျက်စိ ထဲ ရုပ်ရှင်ပြသလို မြင်နေခဲ့တယ်။
ချက်ရင်းပြုတ်ရင်း အားပေးဖတ်ရှုနေရတာမို့ အရီးလည်းပင်ပန်းနေရော့မယ်
ဒါပါဘဲလေ ………… ရွာကိုသံယောဇဉ်ရှိကြသူတွေဆိုတော့လည်း
ဟုတ်ပါ့.. ဦးဆာရယ်.. မရေးတတ်ပေလို့ပဲ.. ဦးဆာကို မမြင်ဖူးပေမဲ့.. ဖတ်ရင်း ဦးဆာရဲ့ပုံကို မျက်လုံးထဲ ပေါ်လာတယ်.. နေဦး.. ဒီတခါ တွေ့ဆုံပွဲရောက်ရင် ဦးဆာကို အရင် ရှာပြီး မျက်လုံးထဲက ပုံနဲ့ တိုက်ကြည့်ရမယ်… အိမ်သာတံခါးဆွဲတာတော့ မပေါ်ဘူး.. ကွမ်းငုံထားပြီး.. အအ ပုံစံက မျက်လုံးထဲ ကွက်ကနဲ ကွင်းကနဲပဲ… ရီချင်နေပါတယ်ဆိုမှ.. အအေးဆိုင်ကို ထပ်ရောက်လို့ ဟိုက နှုတ်ဆက်တာကို ပြန်ပြောတဲ့ အခန်းမှ ပါးစပ်က ခွိကနဲ ထွက်ကျလာတာပဲ.. တတ်လဲ တတ်နိုင်တယ်နော်… မြန်မာပြည်က ဒါရိုက်တာတွေ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်သင့်တယ်.. ဒါမှ တကယ့် အသက်ဝင်ပြီး ဟာသ ရသမြောက်တာ သိမှာ.. မဟုတ်ရင် ကလိထိုးရီနေရတယ်… ဆက်ရေးပါ.. အားပေးပါမည်…:)
ဟူးးးးးး မောလိုက်တာ ကိုယ့်ဆရာနာမည်က
အဇ္ဇ +ဥပေါသထ = အဇ္ဇုပေါသထော ဖြစ်လာတာဆိုတော့
ရေမြေ့ + သနင်း = ရေမြင်းးးးးးးးးးးးးး လို့ အဲဒါ
အဟီး ရယ်ရတယ်။ ကျတော်တို့ ကွမ်းသမားတွေဘွလေ ဆြာဆာမိရေ…။ ကျနော်ဆို လိုင်းကားပေါ်မှာ ကွမ်းအငုံကောင်းလို့….မှတ်တိုင်ကျော်ဖူးတာခနခန..။ ကွမ်းမူးလို့ တွေရာမှတ်တိုင်မှာ ဆင်းပြောရတာ လည်း ဒုက္ခ…။
စစ်ကနယ် ဆိုလား အဲဒီဆေးလေ
တစ်ခါတည်းကို ဆန်ပြုတ်ရောင်းတဲ့အထိ မူးပစ်လိုက်တာဗျာ
နောက်နောက် အဲဒီဆေး ဘဟ်တော့မှမစားတော့ဘူးဟဟဟ
စကားမပြောသော ကားသမား ဦးဆာ ပေါ့ဟုတ်လား
တကယ်တော့ အပြင်မှာ စကားအလွန်များသောသူပါ ကိုခ ရယ်
ကိုကြီး ကျော့်ကို ပီယဆေးလေးလုပ်ပါဗျာ..အဟိဟိ
၁၄ နှစ်တောင် မျိုသိပ်ခဲ့ပြီးမှ ဖွင့်ပြောရက်လေတယ် လေးဆာမိရယ်….
ကာယကံရှင် ဖတ်မိရင် အတော်ရှက်ရှာမယ်သိလား…
ဘ၀ကို အရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားပါတယ်။
## အခွင့်သင့်ပါက ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါဦးမည် ## ဆိုတာကော အခွင့်မသင့်သေးဘူးလား။
ဖြစ်ချင်တော့၊အဲဒီမနက်ကကျောင်းမှာ၊အတိုက်ခံရတဲ့ယောင်္ကျားလေးရဲ့ နဖူးပြင် ဘုသီးထွက်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
အတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့မိန်းခလေးကို ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်ကမှန်းမသိလို့ ခွင့်လွှတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်း ကို၊ဖွနေတာပြန်ကြား
အားလုံးက ရေအိမ်တက်ချင်လာကြတာနဲ့ ဟိုင်းကြီးကျွန်းမှာနားကြတယ်။ရေအိမ်တက်ချင်လို့ တစ်ရွာလုံးပတ်ရှာတာ အကာအရံမရှိတဲ့အိမ်သာတွေ ချည်းတွေ့ရတယ် ။ အဲလိုမျိုးမှာရေအိမ်မတက်ဘူးတော့ ဇောချွေးပြန်ပြီး သေးတောင်ထွက်ကြတယ်။ ငယ်လည်း
ငယ်သေးတော့ တော်ပါသေးတယ်။ စကဒ်ဆိုတော့ ပင်လယ်ရေနဲ့ဆေးပြီး အခြောက်ပြန်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုအဲ့လို ဖြစ်တတ်တာပြောပါတယ် ။။။